China Compressor Piston Kugadzira uye Fekitori |Yuanfang
Kukanda jecha inzira yekugadzira simbi.Kutanga, matatu-dimensional jecha mold inoumbwa, uye ipapo simbi yakanyungudutswa inodururwa mumhango yejecha mold kuti iome.Mushure mokunge zvikamu zvesimbi zvakanyoroveswa uye zvaumbwa, bvisa ganda rejecha.Mamwe majecha ejecha anoda post processing mushure mekukanda.Kukanda jecha kunogona kuburitsa marudzi ese esimbi, kusanganisira simbi yakakandwa, yakakosha alloy simbi zvichingodaro.Kukandira jecha inyanzvi yehupfumi uye inoshanda zvakanyanya, inogona kuchinjika kuenderana nezvinodiwa zvehukuru uye dhizaini yekugadzira.Kukandwa kwejecha kazhinji kunoda kugadziridzwa kwechipiri kuvandudza kurongeka kwezvigadzirwa.
Marine injini dzedhiziri, dzakadai seMAN, DAIHATSU, YANMAR, nezvimwewo. Dzidzisa injini dzinopisa mukati, dzakadai seGE, EMD, CRRC, nezvimwewo.
1. Ndivanaani vashandi mudhipatimendi reR&D rekambani yako?Ndezvipi zvinodiwa zvebasa ravo?
Kambani ine vashandi makumi matanhatu nenhanhatu veR&D, vanosanganisira vashandi vehunyanzvi uye vehunyanzvi mukukandira, welding, zvinhu, michina, kutonga kwemagetsi, hydraulics, nezvimwe. Kune vanopfuura gumi vevashandi veR&D, vese vane makore anopfuura makumi matatu echiitiko mumuchina chigadzirwa. kugadzira uye kugadzira michina.
2. The kambani tsvakurudzo uye kubudirira basa conte?
(1) Vatengi vanopa zvakasara zvikamu zvekudhirowa-kukanda maitiro dhizaini-mold dhizaini-mold kugadzira-sample muyedzo kugadzirwa-machining
(2) Dhizaina mapurojekiti mhinduro kune vatengi-midziyo dhizaini-kugadzira-assembly-sample
6. Ndezvipi zvirongwa zvako zvekutanga zvigadzirwa zvitsva?
Zvigadzirwa zvedu zvakamisikidzwa mukukandira uye kugadzirisa kwezvikamu zveinjini yedhiziri, michina yekuvaka, michina yekurima uye zvimwe zvikamu, pamwe nekugadzirwa kwakagadzirirwa kwemidziyo yekudzivirira kwezvakatipoteredza.Zvigadzirwa zvitsva zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvakapfuura: Agricultural Tractor Hub
Zvinotevera: DTA Support